भोलि (शनिबार) पनि पर्न सक्छ लामो झरी, झन कोशी किनारको बस्तीको अवस्था कस्तो होला ? - Sagarmatha Online News Portal
भोलि (शनिबार) पनि पर्न सक्छ लामो झरी, झन कोशी किनारको बस्तीको अवस्था कस्तो होला ?
काठमाडौं किनारकै बस्ती जोखिममा !
काठमाडौं । लगातारको वर्षासँगै उपत्यकाका नदी किनारमा बस्तीहरु डुवानमा पर्न थालेका छन् । कलंकी, कुलेश्वर लगायतका स्थानमा बाढी बस्तीमा पसेको छ भने हनुमन्ते खोलाको पानी पनि बस्तीतिर सोझिएको छ ।
तर अझै वर्षा रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागकाअनुसार अझै दुई दिन पानी पर्छ । मौसमविद् समिर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अझ भोलि त आजको जस्तै लामो झरी पर्ने सम्भावना छ ।’ विभागका अनुसार शुक्रबार विहान ८ः४५ बजेसम्म काठमाडौंमा ५०.६ मिलिमिटर पानी परेको थियो । त्यसपछि दिउँसो २ः४५ सम्म थप ४४ मिलिमिटर पानी परेको छ । अब केहीबेरमा साँझ ५ः४५ सम्म परेको पानीको मात्रा आउँछ ।
यसरी हेर्दा काठमाडौंमा अहिलेसम्मकै ठूलो पानी परेको होइन । तर, ठूलोमध्ये एक भने हो । विभागको तथ्यांक अनुसार २३ जुलाई २००२ मा १७७ मिलिमिटर पानी परेको थियो । जुलाई महिनाभरको हिसाब हेर्ने हो भने गतवर्ष ३६५ मिलिमिटर पानी परेको थियो । यो वर्ष १३९ मिलिमिटर पानी परेको विभागले जनाएको छ । तर डुवानको समस्या भने बढ्दो छ ।
उपत्यकामा विगतका वर्षहरुमा डुवान नभएका सडक किनारका बस्तीहरु समेत यो वर्ष पानी परेको छ । यसको प्रमुख कारण कोरिडर सडकका नाममा नदीलाई साँघुरो बनाउने, नदी मिचेर बस्तीहरु बनाउनुलाई मानिएको छ । यस्तै शहरका कंक्रिट संरचनाहरु बढ्दो छ । यसले गर्दा परेको पानी जमिनमुनि जाने ठाउँ छैन । मौसदविद् श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आकासबाट परेको पानी जमिनमुनि जानै पाउँदैन । सिधै खोलामा पुग्छ । यसले पनि पानीको सतह बढेको हो ।’ पानीको सतह बढेपछि स्थानीय प्रशासनले नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरुलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।